Madaxweyne shariif oo maanta masjidka shuhadaa ee ku yaala madaxtooyada uga duceeyay dadkii ku dhintay Qaraxii ka dhacay tiyaatarka.. | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Madaxweyne shariif oo maanta masjidka shuhadaa ee ku yaala madaxtooyada uga duceeyay dadkii ku dhintay Qaraxii ka dhacay tiyaatarka..
April 6th, 2012 – Madaxda sar-sare ee dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa ka codsaday shacabka in ay ka qeyb qaataan howlaha lagu sugayo ammaanka dalka gaar ahaan caasimadda Muqdisho si looga hortago waxyaabaha wax u dhimaya amniga.
Madaxweynaha dowladda KMG ah ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay shacabka in ay soo sheegaan markii ay arkaan dadka qorsheynaya falal lagu waxyeelaynayo dadka rayid ah, laguna carqaladeynayo horumarka ay tiigsanayaan.
Sheekh Shariif ayaa ummadda Soomaaliyeed uga digay in ay gacan siiyaan dadka is qarxinaya, isagoo sheegay in haweeneydii gaysatay qaraxii tiyaatarka qaranka iyo dadkii ku caawiyay ay isku dambi yihiin.
Madaxweyne Sheekh shariif ayaa xusay in markii al-Shabaab ay ku guul-dareysteen dagaallada ay ka wadaan gudaha Soomaaliya ay billaabeen in ay da’yarta ay u adeegsadaan falal guracan, isagoo hadalkan ka jeediyay salaadii Jimco ee maanta masjidka shuhadaa ee ku yaala madaxtooyada.
Madaxweyne shariif ayaa qudbadiisa salaada jimco waxa uu ku soo qaatay qaraxaas, waxa uuna Tacsi u diray dhamaan Umada Soomaaliyeed.
Jaaliyadaha beesha Hawiye ee Yurub iyo Ameerika oo cambaareeyey xasuuqii tiyaatarka kuna baaqay in lacag la dul dhigo madaxyada Cali Dheere, Fuaad Shongole iyo Axmed Godane Danjire Maxamed Cusman oo khudbad ka jeediyay Shirweynaha Isbahaysiga Urrurrada soomaaliyeed ee sweden